Is Diidooyinka Dib U Dhaca Doorashada Maxaad Ka Ogtahay?…Soo Diyaarintii Yasin Calase | Baligubadlemedia.com
Is Diidooyinka Dib U Dhaca Doorashada Maxaad Ka Ogtahay?…Soo Diyaarintii Yasin Calase
Waxa maalmahan hadal haynteedu ay taagantahay muranka asxaabta ee doorashadda iyo goorta ay dhacayso.
Saddexda xisbi ee Waddani, Kulmiye iyo UCID ayaa mudooyinkii u dambeeyay ku hawlanaa sidii ay xal uga gaadhi lahayeen qabsoomidda doorashadda wakiiladda iyo deeganka.
Kadib markii uu xisbiga Waddani diiday in ay Gudida doorashooyinka ee haatan joogta ay doorasho dambe u qabato.
Kadib kulamo badan oo intooda badan aan wax natiijo ah aanay ka soobixin waxa lasoo gaadhay maalintii xeerka dorashooyinka Qodobkiisa 9aad siiyay in ay Komishanku ku sheegan in aan doorasho dhacay maalintas oo ahayd 28 Nov 2018. Maalintaas oo ah 120 cisho ka hor maalinta doorashadda ka horaysay. Sida uu dhigayo xeerku waxa 15 cisho kadib ay ahayd in madaxweynahu u gudbiyo golaha guurtida si ay mudo kordhin ugu sameeyan golayaasha hada jooga.
Maalinta ay ahayd in madaxweynaha qora warqadu sida xeerku uu dhigaayo waxa ay ahayd sharciyan 13 Dec 2018 oo ku beegan 15 cisho kadib maalinta komishanku sheego in aanay doorasho qabsoomayn.
Waxa mudada xeerku sheegay loogu gudbin waayay waxa ay ahayd in saddexda xisbi kasoo heshiiyaaan arimaha ay isku khilaaafsan yahiin si ay go’aan ay isku raacsan ayahiin ugu gudbiyaan Guurtida maadama dib u dhacaninahaa mid uu sababay muran siyaasadeed oo u dhaxeeya xisbiyadda qaaar. oo ay ugu horeyso in xisbiga Waddani lagu qanciyo in uu daayo Komishanka haatan jooga si ay doorashada u qabtaan 2019.
Waxa ay yeeshen mudaba 5 jeer kulamo ay iskugu yimadeen saddexdda xisbi marna labadda xisbi ee UCID iyo Kulmiye gaar u ahaa oo dhamaantood aan wax natiijo ah aan laga gaadhin kulamadaas, marka laga tagiwaayo in xisbiga UCID uu sheegay in xisbiga Kulmiye yeelay soo jeedinti ahayd in 2 xubnood lagu daro Komishanka dambe taas oo xisbiga waddani diiday una arkay in aan wax is badalay jirin marka loo eego waxii ay ka cabanaayen.
Hadaba muwaadin yaad u malaynaysa in ay eeda dib u dhaca doorashadda leedahay?
Halkan hoose ka eeg isdiidoyinka ay tahay in aad dhugato si aad go’aankaga cida leh eeda dib u dhaca ugu salayso.
1. Bishii Febuary 2018 Komishanka Doorashooyinku waxa ay u gudbiyeen madaxweynaha qorshaha diwaangalinta iyo doorashooyinka. Iyo Miisaaniyadda/Lacagta ku baxaysa oo dhan 16 Million oo Dollar.
2. Bishii March 2018 ayaa xisbiga Waddani kalsoonidii kala laabtay Gudida Komishanka Doorashoyinka.
3. Bishii June 2018 ayaa Komishanka Doorashoyinku u gudbiyeen isku dhafka xeerka doorashooyinka oo wax kabadal iyo kaabid ay ku sameeyen. Kaas oo golaha wasiiraduna ansixiyeen una gudbiyeen golaha wakiiladda si ay u ansixiyaan. Golaha wakiiladu waxa ay fadhiisteen mudaba saddex kalfadhi midna laguma soo darin agendaha xeerka doorashooyinka waana mawduuca ugu muhiimsan ee aynu kawada hadlayno loomana dhaqaaqin ilaa hada oo ay sheegen in March 2019 dib loo furi doono golaha.
4. Xukuumaddu waxa ay 2018 miisaaniyadda ugu dartay diwaangalinta 28,800,000,000 ($2.8m). Lacagtaas oo loogu talo galay diwaangalinta iyo kaadhqaybinta.
5. Haddana waxa ay xukuumaddu Miisaaniyadda 2019 ugu dartay isla lacagtii hore ee 2018 mid leeg oo ah 28,800,000,00 ($2.8m). FG. 2018 waxa ay komishanku qabanaayeen diwaangalin iyo kaadhqaybin. Lakiin 2019 hadii ladoonayo in ay doorasho dhacdo waxa laqabanaya waxa weeye. Diwaangalin, kaadhqaybin iyo Doorashooyin isasaaran oo Wakiilo iyo deegan ah. Waxa caqliga fayoobi sheegaya in qondada miisaaniyadda ee 2019 ay ka badato tii 2018 waliba maadama oo ay Komishanku ku qiyaasen lacagta 16M oo waliba 50% dawladda laga doonaayo noqonaysana $8m waxa ay ahayd in $8m ay ka muuqato miisaaniyadda $8m kale ay u hawl gasho si ay doorashadu u qabsoonto 2019 lakiin kama muuqato qoondada miisaaniyadda lacag lagu qaban karo doorasho 2019. Waana sababta Madaxweynahu warqadii uu u qoray Guurtidda ugu sheegay sababaha dib udhaca doorashooyinka in ay kamid tahay arimo dhaqaale in aanay doorasho u qabsoomi doonin.
6. Iyadda oo aan laga gaadhin wax heshiis ah khilaafkii xisbiyadda ee Komishanka jooga laga qabay ayaa madaxweynahu waxa uu 9 Jan 2019 u gudbiyay golaha guurtidda codsiigii mudo kordhinta wakiiladda ee hore dib loogu dhigay in heahiis laga gaadho mudada doorasho lagu qaban karo ee korodhsiin loo samayn karo golayaasha jooga. Isaga oo ku sheegay madaxweynahu sababta dib udhaca doorashadda ku keentay labbo qodob oo kala ahaa “Arimo farsamo iyo Dhaqaale”.!!!!!
Qodobadaa madaxweynahu sheegay ee loo nisbeeyay dib u dhaca maaha kuwa keenay dib u dhaca doorashadda ee waxa keenay muran siyaasadeed oo ka dhexeeya xisbiga Waddani iyo Kulmiye waana dib udhacii ugu horeeyay ee sababo la xidhiidha muran siyaasadeed ay ku keentay doorashooyin dib u dhacay.
Warqadda uu madaxweynahu u qoray Guurtidda waxa aad mooda in aan la tix galin wadahadaladii iyo dhexdhexaadintii asxaabta waxaana marag u ah waxa ay maanta soo wadda saaren xisbiyadda UCID iyo Kulmiye ee ay ku sheegen go’aano ay isla qaaten kuwaas oo nuxurkoodu yahay in labadooda 2019 doorasho loo qabto.
Waxaana ay u muuqata in aan warkooda cidiba dhagaysanayn oo ay guurtidu 2 sanno kordhin doonto todobaadkan soo socda maadama komishanka jooga ee la diidanyahay in ay doorasho iyo hawsheeda qabtaan dhamaysa ayaan mudo xileedkooda oo ku een November 2019. Sidoo kale qoladda cusub ee lasoo magacaabana ay qaadan doonto mudo aan ka yarayn sanad in ay ku diyaariyaan hawlahii doorasho waaba hadii lasoo dhiso e.
Muwaadin wax halaguu sheege maankaga la kaasho.